Daryeel iyo caawinaad - Örnsköldsviks kommun
- Daryeel iyo caawinaad
Degmada weey kaalmeysaa iyo caawisaa bulshada oo sababto kala duwan daraadeed u baahdo caawinaada degmada bixiso muddo dheer ama muddo gaaban. Caawinaada qaarkood waxaa shaqo ku leh sharciga adeega bulshada[Socialtjänstlagen] iyo sharciga kaalmeenta iyo adeega dadka curyaanada qaarkood. Adeegyada kale oo degmada bixiso waxaa go’aamiyo siyaasiinta degmada.
Daryeelka dadka gaboobay
Qofkii oo da’weeyn gaaro oo u baahdo kaalmeen sidoo nolol maalmeedkiisa u noolaankaro wuxuu caawinaad ka heli kara degmada. Kaalmeentaas waxeey hoos imaan sharciga iyo degmada waa iney koow baaritaan ku suubisaa shaqsikasto baahida uu qabo. Shaqaalaha dadka guryahooda ku kaalmeeyo waxey qofka ka caawiyaan daryeelida jirka, daaqwooyinka, isnadaafinta, wax dhaqida iyo nadaafinta guriga. Qofka ey ku adagtahay inuu cuntada karsado gurigiisa baa loogu keeni cunto bisil. Qofkii oo da’weeyn gaaro oo kaligiis nool waxaa loo suubin seenyaalada aaminka oo ey isticmaali karan haddii ey caawinaad u baahnaadaan.
Qofkii u baahan daryeel iyo in laga warhaayo si joogto ah wuxuu ku noolankara guriyaha daryeelka iyo xannaaneynta, oo meeshaas waxaa joogo shaqaalo 24tii saac. Dadka meeshaas ku nool qofkasto wuxuu ku noolyahay qol gooni laakin waxaa jiro barxado ka wada dhaxeeyo.
Qofkii la siiyo caawinaada adeega iyo daryeelka degmada wuu iska bixin qarashka adeegaas. Qarashka intuu noqonaayo wuxuu ku xiranyahay caawinaada qofka la siiyo iyo qofka dhaqliga soo galo.
Waxaa xitaa jiro adeeg fudud oo wax lacag joogin. Lokaalada la isku la kulmo oo dadka da’da weeyn ey dhaq-dhaaqyo kala duwan ku suubiyaan.
Haddii aad dooneysid inaad caawinaad soo codsatid, la soo xiriir qeybta daryeelka bulshada: 0660-26 51 82.
Dadka oo curyaanada waa in la siiyaa caawinaad sidey nolol maalmeedka mushtamaca kale ula qaadan karan oo sida dadka kale camal. Kaalmeenta waa mid shaqsin iyo degmada waxey shaqsiyan u qiimeyn qofka shaqsiga baahidiisa.
Qofka u baahan caawinaad badan sidoo nolol maalmeedkiisa uga bixi karo wuxuu heli kara shaqaale kaalmeeyo oo ka caawiyo nadaafinta jirka, xiroshada darka, wakhtiga cuntada iyo waxyaabaha kale uusan qofka suubsan karin.
Qofka curyaanka oo caawinaad badan u baahan oo daryeel caafimaad iyo kaalmeen wuxuu degikara guryaha oo caawinaada qaaska laga helo. Waxey ahaan kartaa guryaha koox ahaan la isku la deggenyahay ama guryaha caadiga ah. Guryaha koox ahaanta qofka wuxuu deggenyahay guri u qaas ah laakin meeshaas waxaa laga shaqaalo 24tii saac. Qofkii isku filan in badan wuxuu helikara guryaha adeega. Waa guryo oo madax bannaan oo qofka ku nool la siinaayo kaalmeenta uu shaqsiyan ahaan u baahanyahay.
Degmada waxey ka bixin qofka curyaanka lacagta gurigiisa loogu waafajinkaro, tusaale ahaan in ilbaabka loo ballariyo siduu kursigiisa ula soo galikaro.
Qofkii u baahan maskiinka wax maqalka, kursiga dadka gaboobay cugsadaan[rullatorer] ama qalabka kale oo kaalmeenta sidey curyaanida eysan u xayirin wuxuu la xiriiri rugta caafimaadka oo ka tirsanyahay.
Qofkii daryeel siiyo qof ey nolol wadaagaan, markii baahidiisa la baaro kadib, waa la caawin kara ayada ama asaga sidey marmar u nashan karan. Waxey caawinaadaas ahaan kartaa in qofka gurigiisa loogu imaado oo quleyska laga qaado ama qofka daryeelka u baahan guri kale muddo gaaban ku noolaado oo meeshaasna waxaa joogo shaqaalo waxbarasho soo dhigtay qofka ehelkaada gacanta ku hayaano inta uu la joogo.
Shaqaalaha degmada oo arrimaha dadka gaboobay baa isku daba rido wada hadalka kooxyada, kulano warbixin iyo kaalmeynaayo ehelka.
Haddii aad dooneysid inaad warbixin kale ka sii heshid kaalmeenta ehelka, la soo xiriir shaqaalaha arrimaha ehelka: 0660-883 14. Haddii aad dooneysid inaad soo codsatid kaalmeenta ehelka oo ehelkooda daryeelo, la soo xiriir qeybta daryeelka bulshada: 0660-26 51 82.
Kaalmeenta qoysaska iyo qofka shaqsiga
Degmada waxey kaalmeyn siisaa qoysaska iyo qofka shaqsiga oo dhowr sababo oo kala duwan u baahan kaalmeenta degmada muddo gaaban. Taas waxaa sabab u ahaan karo shaqo la’aan, dhaqaalo xumo, jiro maskaxiyan ama mukhaadaraad isticmaalid oo khamri ama doroogooyinka kale.
Degmada baa mas’uul ka iney difaacdo carruurta noloshooda halis ku jirto. Dhammaan qofkii shakii ka qabo in canuga jir dil lagu suubiyo ama si kale halis waxaa habboon inuu ashkood u soo diro degmada. Shaqaalaha dugsiyada ka shaqeeyo iyo shaqaalaha kale qaarkood waxeey qasab ku tahay, sida sharciga ku qoran, iney ashkood suubiyaan haddii ey ka shakiyaan inuu canug halis ku jiro. Degmada waxey markaas go’aan ka gaari haddii canuga u baahanyahay difaac degdeg ah ama haddii baaritaan la bilaabaayo.
Haddii qof weeyn jir dil lagu suubiyo oo qofka dambiga geysanaayo uu yahay qof ey isla noolyahiin markaas waxaa dhicikarto in degmada kaalmeen karto qofka jir dilka loo geystay. Qofka jir dilka suubinaayo xitaa waxaa laga caawinkara ficilada carada.
Wada hadalka qoyska waxaa lagu martiqaadi dadka nolosha wadaago, qoysaska iyo qofka kaligiis nool oo wax iska badal rabo inuu noloshiisa ka gaaro. Wax qoraal ah ma laga suubinaayo iyo waxa laga wada hadlo cidna loo ma gudbinaayo. Haddii turjum loo baahanyahay waa la ballamin.
Shaqaalaha degmada oo kooxda adeeg bannaanka waxey joogaan goobaha dhallinyarada sidey u abuuran aaminaad iyo uga shaqeeyaan ka hortagida dambiyada iyo mukhaadaraadka.
Haddii aad dooneysid inaad codsatid kaalmeenta iyo caawinaad ku quseyso adiga shaqsiyan ama dhibaato qoyska, la soo xiriir kooxda qaabilaada: 0660-888 07.
Talo Wada hadalka qoyska waxaa ka heleysaa: 0660-886 87 ama 0660 -886 89.